Nnwale akwa akwa
Nnwale Ọsọ Agba
Ngwongwo ihe omuma
Akụkụ kwụsie ike
Nnwale arịa ụlọ
nyocha ụlọ ọrụ na n'èzí n'ule
akụrụngwa na-anwale ụfụfụ
Agba Film Tester
Osisi Ngwá Ọrụ Tester
upholstered ngwá ụlọ ule
Akpa na ule ikpe
Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ
Akwụkwọ Carton na ule ngwugwu
Safetymụaka nchekwa ule
Ebumnobi ngwa ngwa Tester
Agba abịa Series
Ike nke igwe nyocha ule zuru ụwa ọnụ enweghị mgbagha
Igwe nyocha nke ikuku zuru ụwa ọnụ (nke a na-akpọ igwe nyocha nke tensile ma ọ bụ igwe nyocha nke ikuku, nke a na-akpọzi igwe nyocha) bụ ngwaahịa nke ngwakọta nke teknụzụ teknụzụ ọgbara ọhụrụ na teknụzụ mgbasa ozi. ...
Kedu otu esi eme ka mmepụta oche dị ụkọ?
site ha na 21-07-17
Ekwenyere m na ọtụtụ ndị nwe ụgbọ ala na ndị enyi ga-ahụ nsogbu nke ụfụfụ oche ụgbọ ala na-ada mgbe ha jiri ụgbọ ala maka oge. Ọtụtụ mgbe akụkụ nke oche ahụ na-ada ma mebie nsogbu ndị kachasị njọ. Maka n'elu situat ...
TST Instrument (Fujian) co., Ltd （matraasi anwụ ngwa ngwa igwe （（nyocha zuru ụwa ọnụ） na-ekele anyị ụbọchị ọmụmụ 100th china.
site ha na 21-07-01
TST Instrument (Fujian) co., Ltd （matraasi anwụ ngwa ngwa igwe （（nyocha zuru ụwa ọnụ） na-ekele anyị ụbọchị ọmụmụ 100th china. Afọ 2021 akara afọ 100 nke ntọala nke Communist Party nke China (CPC). Mgbe Communist Party nke China malitere ...
Mkpa nke ndị nrụpụta na-anwale ekwesiri na ike nke matarasị
Ka ọ dị ugbu a, e nwere ọtụtụ ụdị mpempe akwụkwọ dị na ahịa, na mpempe akwụkwọ dị iche iche na ọkpụrụkpụ nwere ike inye ndị mmadụ ụra ụra dị iche iche. Agbanyeghị, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọnụọgụ erughị eru nke nyocha akwa akwa ahụ ka dị elu, yana oge ịkpọtụrụ nke akwa akwa ahụ na hum ...
Standardkpụrụ ọhụrụ maka ụra ụra-akwa ụra ergonomic
site ha na 21-05-12
Standardkpụrụ ọhụrụ maka ụra ụra-akwa ụra ergonomic ike ike, ike, ike nke oyi akwa ọ bụla, ọnụọgụ hysteresis, data ndị a nwere ike igosipụta data dị mkpa nke ngwaahịa matrasị ahụ。 Matress ergonomic testing testing machine-hardness classification and distributio ...
47th CIFF Guangzhou ejedebela nke ọma
site ha na 21-04-06
Nke 47th China International Ngwá ụlọ Fair (CIFF) Guangzhou
site ha na 21-03-04
47th China International Furniture Fair (CIFF) Guangzhou Anyị ga-aga 47th China International Furniture Fair (CIFF) Guangzhou site na 28th ruo 31th, March, 2021, nọmba ụlọ ntu anyị bụ mpaghara B, S121A38, nabata ileta.
Afọ Ọhụrụ ndị China (Ememme Oge opupu ihe ubi) ezumike
site ha na 21-01-28
My ezigbo fridends, anyị ga-na ezumike na Chinese New Year si 3rd na 19th, Feb, 2021, I nwekwara ike na-akpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla n'oge ezumike, anyị ga-aza gị asap. Afọ Ọhụrụ obi ụtọ na afọ OX nke China. Daalụ & ezigbo ekele, Claire S ...
Nnyocha ọmụmụ ụlọ nyocha nke ụlọ nyocha site na 2021 ruo 2027 | Enweta ego siri ike na echiche asọmpi maka ndị isi: Waldner, Kewaunee Scientific Corp, Mott Manufacturing
[Los Angeles, United States], [United States], Jenụwarị 2021 - Akụkọ nyocha nnyocha ọmụmụ ụlọ nyocha ụlọ nyocha gụnyere nghọta na isi [Global Laboratory Case Study Market Research Report 2021] isi ndị sonyere n'ahịa yana profaịlụ ụlọ ọrụ ejiri ma atụmatụ iji bụrụ ha. Nke a na-enyere ndị na-azụ ụlọ nyocha aka ...
Ihe ụlọ ọrụ na-anwale ihe na ụzọ
site ha na 21-01-13
Ngwá ụlọ ule na ahịa na-tumadi kewara n'ime ọrụ oche na oche ule, sofa ule, matraasi ule, ezinụlọ ngwaahịa ule, wdg The anwụ ngwa ngwa ule nke ọrụ oche na stools bụ otu n'ime ihe dị mkpa ule maka ngwá ụlọ na-emepụta, n'ihi na ọdịdị na stru ...
Gini mere akwa ahu ji adi nma?
site ha na 20-11-30
Uwe oyi m nwere mmasị na ya mgbe niile. Gịnị bụ ihe kpatara ya? Na usoro nke owu yarn nhazi na sweta yi, ọ na-emetụta dị iche iche mpụga agha dị ka esemokwu na Anam Udeme ike. Eriri ajị anụ dị na yarn ajị anụ ahụ dị mfe ijikọta ka ọ bụrụ mgbanaka ma ọ bụ otu Onye isi ahụ dịpụrụ adịpụ ...
Ọnọdụ maka nhazi nke ụlọ nyocha nke arịa ụlọ
site ha na 20-11-23
TST Instruments (Fujian) Co., Ltd. bụ ọkachamara na R&D na mmepụta nke akụrụngwa nnwale akụrụngwa, na-enye akụrụngwa a pụrụ ịdabere na ya maka ọrụ dị iche iche, ikike nrụpụta siri ike, njikwa njikwa siri ike na ahịa zuru oke na azụmaahịa ahịa, ka ọ bụrụ custome ...
Arsgbọ ala dịkwa mkpa ịnwale akụrụngwa
Ka ihe ndị ahịa chọrọ maka ọdịdị na teknụzụ nke ụgbọ ala na-abawanye, akụkụ dị iche iche nke ụgbọ ala na-agbanwe mgbe niile. Oche ụgbọ ala na-abụkarị maka nkasi obi, na usoro ihe eji agbanwe agbanwebeghị, mana akụrụngwa, ọrụ na ọdịdị ọdịdị niile bụ nnukwu mgbanwe agbanweela pl ...
Ngwongwo TST gara na Park Pioneer Park nke Liming Vocational University
N'oge na-adịbeghị anya, onye isi njikwa TST Instruments (Fujian) Co., Ltd. gara na "Ntorobịa Pioneer Park nke Liming Vocational University" iji duzie mgbanwe miri emi banyere imepụta akụrụngwa na imekọ ihe ọnụ. Onye nkuzi nke Youth Pioneer Park College webatara ọrụ m ...
Isi ihe dị mkpa maka ịzụta ngwa nyocha akwa
E nwere ọtụtụ ụdị nke ngwa textile nwere arụmọrụ na ọnụahịa dị iche iche. Mgbe ị na-azụ ngwá, ọ bụghị naanị na ị ga-ama ihe ọmụma ọkachamara banyere arụmọrụ nke ngwaahịa na iji ngwaahịa eme ihe, kamakwa ịghọta arụmọrụ na njirimara nke ngwa ndị emepụtara ...
TST ngwá ụlọ ule akụrụngwa uru
site ha na 20-09-22
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, TST Instruments ejiri nwayọọ nwayọọ guzobe ma zuo oke ụlọ ọrụ mmepụta ihe zuru oke nke ụkpụrụ nnwere onwe nnwere onwe nyocha na teknụzụ nke ngwa na akụrụngwa, ọkachasị n'ihi na ahịa maka ngwa ngwa ngwa ngwa akwalitela nke ukwuu ...
Outzọ ọpụpụ maka ụlọ ọrụ arịa ụlọ
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngwa ụlọ na-eche ọnọdụ nke uru dị ala, ọnụ ahịa na-arị elu, na asọmpi siri ike. Uzo esi aga na nsogbu a aburula nsogbu n’uche otutu ulo oru. N'ezie, ihe niile ọ nwere usoro mmepe? Naanị site n'ịga n'ihu ...
Ngwa TST matara APP njikwa dị
Site na ntanetị na-aga n'ihu na ntanetị, ihe ndị teknụzụ chọrọ maka ụlọ ọrụ ngwa ngwa na-arịwanye elu, ọchịchọ ahụ na-arịwanye elu. Okwu ahịrịokwu bụ "ịta ahụhụ bụ isi" dịkwa mkpa maka ụlọ ọrụ ngwa ọrụ. Obere, dị mfe ibu ...
Ihe atọ kpatara erughị eru nke ụlọ ọrụ
site ha na 20-06-09
A na-atụkwasị ọtụtụ arịa ụlọ ọrụ taa na okpu nke erughị eru ma nwee ihe ndị na-emerụ ahụ. Nyocha nke TST Instruments: Enwere isi ihe atọ kpatara arịa ụlọ ọrụ erughị eru. 1. Oké mama ọdịnaya Ọtụtụ ndị na-azụ kwere na osisi bụ natur ...
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ China nke ụlọ ọrụ amalitela nke ọma.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ China nke ụlọ ọrụ amalitela nke ọma. Ọ bụ ezie na mmepe ngwa ngwa nke arịa ụlọ ọrụ, ogo ngwaahịa bụkwa nsogbu na-enweghị ike ileghara anya. Ya mere, ndị na-emepụta ngwa ụlọ na-ahọrọkarị akụrụngwa nnwale ngwa ọrụ dị ka ngwa nke aka ha ...
Donghai uzo CJ-23, Donghaibincheng, Industrial Park, Quanzhou, China